Lee Seung Gi က IU ကို လက်ဆောင်အနေနဲ့ Coffee လှည်းလေးပို့ပေးခဲ့ - MoviesFan
Lee Seung Gi က IU ကို လက်ဆောင်အနေနဲ့ Coffee လှည်းလေးပို့ပေးခဲ့
“Princess And The Matchmaker” ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ မင်းသားချောလေး Lee Seung Gi ဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့က မင်းသမီးချောလေး IU ဆီကို လက်ဆောင်အထူးအဆန်းလေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ Lee Seung Gi ပို့ပေးခဲ့တဲ့လက်ဆောင်လေးကတော့ Coffee လှည်းလေးပါ။ အတွေးဆန်းဆန်းလေးတွေနဲ့ IU ဆီကို လက်ဆောင်တွေပေးနေတာ တစ်ခါမကတော့ဘူးဆိုတော့ ရိုးမှရိုးရဲ့လားဆိုတာ Fan လေးတွေသတိထားပြီးသာစုံစမ်းကြတော့…?။
IU က Drama ဇာတ်ကားအသစ်လေးတစ်ခုကို ရိုက်ကူးရေးလုပ်နေတာလို့သိရပါတယ်။ “My Ahjussi” ဇာတ်ကားသစ်လေးကို ရိုက်ကူးရေးလုပ်နေတဲ့ IU ဆီကို Lee Seung Gi တစ်ယောက် Coffee လှည်းလေး ပို့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Coffee လှည်းမှာလည်း “Ji Eun (IUရဲ့ Birth Nameလေးပါ) နဲ့ My Ahjussi အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားများအတွက်.. အားရှိအောင် အများကြီးသုံးဆောင်ပေးကြပါ” ဆိုပြီးရေးသားထားပါတယ်။ လှည်းရဲ့အပေါ်ဘက်မှာတော့ “သူက Ji Eun ကို အမြဲတမ်းအားပေးနေမယ့်သူပါ၊ ပြီးတော့ My Ahjussi အဖွဲ့သားတွေကိုလည်း အမြဲအားပေးနေမှာပါ” ဆိုပြီး ခေါင်းစည်းစာသားကြီးကို ပြူးနေအောင် ရေးသားထားပါသေးတယ်။
ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့မှာတော့ IU က Lee Seung Gi ရဲ့ လက်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး “အရမ်းကိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်လေးတစ်ခုပါ၊ သူအရမ်းအံ့အားသင့်ခဲ့ရပါတယ်” ဆိုပြီးပုံလေးတွေနဲ့အတူ တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ ၂၀၀၉ခုနှစ်တုန်းကလည်း “Strong Heart” ဆိုတဲ့ Variety Show တစ်ခုမှာ Lee Seung Gi က IU ကို Fancy လက်ကောက်လေးတစ်ခု Christmas လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲ့တုန်းကလည်း Lee Seung Gi တစ်ယောက် “Strong Heart” အဖွဲ့သားတွေနဲ့ ပါဝင်အားဖြည့်တဲ့ ဧည့်သည်တွေရဲ့ စနောက်တာကိုခံခဲ့ရပါသေးတယ်။ ဒါတင်မကသေးပဲ ၂၀၁၅ ခုနှစ်က ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ “Producer” ဆိုတဲ့ Drama လေးမှာလည်း Seung Gi က ဧည့်သည်သရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ ပါဝင်ခဲ့ဖူးတယ်လို့သိရပါတယ်။ Seung Gi ဟာ IU ကို သူ့ရဲ့ဖျော်ဖြေပွဲမှာ ဧည့်သည်အဆိုရှင်အနေနဲ့လာခဲ့ပေးဖို့ ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်လို့ IU က “Strong Heart” မှာဖောက်သည်ချသွားခဲ့ပါတယ်။
IU လေးကို Seung Gi Oppa ကြွေနေတာနေမှာ…? Fanလေးတွေရောဘယ်လိုထင်လည်း၊ ဘာတွေသိထားသလည်း၊ မသိသေးရင်လည်းအသည်းအသန်သာစုံစမ်းကြည့်ပေတော့လို… ?
Previous Post: Wuba လေးကို ပြန်လည်တွေ့ရအုံးမယ့် Monster Hunt 2
Next Post: ကြည့်ပြီးရင် တစ်ကိုယ်လုံးအရည်ပျော်သွားလောက်အောင် ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ‘Pandas’ ရဲ့ Trailer